Xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasaaradda arrimaha gudaha | Star FM
Home Wararka Kenya Xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka oo ka jawaabay hadal ...
Xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka oo ka jawaabay hadal ka soo yeeray wasaaradda arrimaha gudaha
Afhayeenka madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto oo lagu magacaabo David Mugonyi ayaa bayaan uu soo saaray kaga jawaabay hadal uu yiri xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka Dr. Karanja Kibicho.
Kibicho ayaa sheegay in William Ruto dhawaan laga hor istaagay inuu u safro wadanka Kenya dariska la ah ee Uganda maadaama uunan sidan dokumeenti looga baahnaa.
Hasa ahaate Mr. Mugonyi ayaa xusay in aynan jirin dokumeenti oggolaansho ah oo laga doonayo inay soo bandhigaan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa si ay dalka dibadiisa ugu safraan.
Sidoo kale waxaa uu afhayeenka Ruto sheegay inuusan jirin xeer ama wareego ay soo saareen golaha wasiirrada oo arrinkan ku aaddan.
Previous articleDHAGEYSO:Xildhibaanada iyo senatarrada ka tirsan UDA oo ku kulmay Nairobi
Next articleIsraa’iil oo duqeysay Lubnaan